पार्किन्सन रोग के हो ? – MEDIA DARPAN
मिडिया दर्पण	 प्रकाशित २९ माघ २०७७, बिहीबार १०:२८
पार्किन्सन रोग तन्त्रिका वा शरीरको सूक्ष्म अंगहरूमा हुने फैलावट वा विकास हो । जसले तपाईंको हरेक गतिविधिलाई बिस्तारै प्रभावित गराउँदै जाने गर्छ । पार्किन्सन मानव शरीरमा बिस्तारै बिस्तारै विकसित हुँदै जाने समस्या हो । कहिलेकाहीँ केवल एक हातमा मात्रै कम्पन उत्पन्न भएर यसको संकेत गर्ने गर्छ भने कहिले शरीर नै काम्न थाल्ने गर्छ । जब पार्किन्सन रोगको सबैभन्दा मुख्य संकेत बन्ने गर्छ त्यसपछि मान्छेमा अस्वाभाविक कम्पन भएर ऊ बेहोस समेत हुन सक्छ । पार्किन्सन रोगको सुरुवाती चरणमा तपाईंको अनुहारमा देखिने हाउभाउ शिथिल हुँदै जाने गर्छ ।यस रोगको लक्षण र संकेत हरेक व्यक्तिमा भिन्न हुन सक्छ । यसको सुरुवातमा पूरा संकेत नदेखिन सक्छ । सुरुवाती संकेत कम हुन सक्छ र सहजै यसलाई पत्ता लगाउन नसकिने पनि हुन सक्छ । यसको लक्षण अक्सर तपाईंको शरीरको एक तर्फको हिस्सामा देख्न सुरु हुन्छ र स्थिति धेरै खराब हुँदै जान्छ । यसपछि पूरा शरीर यसको लक्षणबाट प्रभावित हुँदै जाने गर्छ ।
पार्किन्सन रोगको संकेत र लक्षणहरु निम्नानुसार छन् ।
कम्पन :हिँडडुल गर्दा वा त्यसै बस्दा पनि तपाईंको हात र औंलाहरु काम्न सुरु हुन्छ । यसको कारण तपाईंका औंला र तर्जनीलाई एकअर्काेमा रगड्न सुरु गर्नुहोस् । जसलाई पिल–रोलिङ ट्रेमर भन्ने गरिन्छ । शरीर वा हात काप्नु पार्किंन्सन रोगको एक लक्षण हो । आरामको स्थितिमा तपाईंको हातमा हुनेवाला कम्पनलाई हामीले यसको मुख्य लक्षणको रुपमा लिन सक्छौं ।
काममा सुस्तता : यो रोग लागेपछि तपाईंको हिँडडुल गर्ने र काम गर्ने क्षमतामा कमी आउँछ । जसका कारण एक सहज कार्यमा समेत कठिनाई उत्पन्न हुन सक्छ र समय अधिक लाग्न सक्छ । तपाईंँले हिँडडुल गर्दा धेरै समय लाग्न सक्छ ।
कठोर मांशपेशीहरू : तपाईंको शरीरको कुनै पनि हिस्सा वा मांसपेशीमा दुखाइ हुन सक्छ । कठोर मांशपेशीको गतिलाई सीमित गराउनमा उद्धत हुन सक्छन् ।
स्वचालित गतिविधिमा हानि हुनु : पार्किन्सनका बिरामीमा अचेत कार्य गर्ने क्षमतामा कमी आउन सक्छ । जसमा आँखीभौंहरू झिम्काउनु, मुस्कुराउनु या हात हिँडडुल गराउनु आदि पनि यसमा सामेल हुन्छन् । कुराकानी गर्ने समय अनुहारमा धेरै समयको लागि हाउभाउ गर्न सकिँदैन ।
आवाजमा परिवर्तन हुनु : पार्किन्सन रोगको परिणामी स्वरूप उच्चाहरणसम्बन्धी समस्याहरू हुन सक्छ । तपाईंको स्वर कम तीव्र वा अस्पष्ट हुने पनि यही रोगको समस्या हुन सक्छ ।
पार्किन्सन रोगको कारण र जोखिमको कारक
पार्किन्सन रोगमा मस्तिष्कमा उपस्थित केही तन्त्रिका वा कोशिकाहरू बिस्तारैबिस्तारै खराब हुन थाल्छन् या नष्ट हुन सक्छ । न्यूरोन्सहरुले हाम्रो मस्तिष्कमा डोपामाइन नामको रसायन उत्पन्न गर्छन् । डोपामाइनको स्तरमा आउनेवाला कमी असामान्य मस्तिष्कको गतिविधिका कारण बन्ने गर्छ । जसको परिणाम स्वरुप पार्किन्सन रोगको संकेत मिल्ने गर्छ । पार्किन्सन रोगको कारण अज्ञात हुन्छ ।
तपाईंको जीन : शोधकर्ताहरुले विशिष्ट जेनेटिक उत्परिवर्तनहरुको पहिचान गरेको छ । जुन पार्किन्सनका बिरामीको कारण बन्न सक्छ । तर यो पार्किन्सन रोगबाट प्रभावित परिवारका सदस्यहरू वाला दुर्लभ मामलाका अलावा असामान्य हुने गर्छ ।
पर्यावरणसँग सम्बन्धित कारण : केही विषाक्त पदार्थहरु या पर्यावरणीय प्रभावले अन्तिम चरणको पार्किन्सन रोगीहरुलाई जोखिम बढाउन सक्छ । तर समग्रमा यसबाट पार्किन्सन रोगको जोखिम कम हुन्छ ।
संक्षेपमा पार्किन्सनका बिरामीको लागि उत्तरदायी कारकको पहिचान गर्नको लागि अहिले अधिक शोध गर्नु आवश्यक छ ।
पार्किन्सन्सको जोखिम कारक के हो ?
पार्किन्सन रोगको जोखिमका कारकहरू निम्नानुसार छन्
बढ्दो आयु – पार्किन्सन रोग युवाहरूमा धेरै कम पाउने गरिएको हुन्छ । यो आम रूपमा जीवनको मध्य या अन्तिम अवस्थाको समयमा सुरु हुने गर्छ र उमेरको साथ जोखिम पनि बढ्दै जान्छ । यसका बिरामी सामान्य रूपमा हेर्दा ६० वर्ष या सोभन्दा अधिक उमेर पुगेपछि हुने गर्छन् ।
आनुवांशिकता – तपाईंको कुनै नजिकको आफन्तलाई पार्किन्सनको समस्या छ भने तपाईंमा पनि यो समस्या बल्झिने सम्भावना बढी हुन्छ । जबसम्म तपाईंको परिवारमा कसैलाई पनि यो समस्या छैन भने तपाईंमा यो समस्या देखिने सम्भावना अत्यन्त न्यून हुन्छ ।
पुरुषहरुलाई जोखिम अधिक – महिलाहरुको तुलनामा पुरुषहरुमा पार्किन्सन रोग विकसित हुने सम्भावना अधिक हुने गर्छ ।
विषाक्त पदार्थको सम्पर्कमा आउनु – वनस्पतिनाशक र कीटनाशकको औषधिको निरन्तर सम्पर्कमा आउनुले तपाईंको पार्किन्सन रोगबाट ग्रसित हुने खतरा धेरै हुन सक्छ ।
पार्किन्सन रोगबाट बच्ने तरिका
पार्किन्सन रोगको कारण अज्ञात हुन्छ । यसकारण यसको रोकथामको तरिका पनि एक रहस्य नै हो । अहिले केही शोधबाट पत्ता लागेको छ कि कफी, चिया र कोकाकोलामा पाइने कफिन पार्किन्सन रोगको जोखिम कम गर्ने औषधि हो । ग्रीन टीले पनि यसको खतरालाई कम गर्ने गर्छ । नियमित एरोबिक व्यायामले पनि यस रोगको जोखिमलाई कम गर्न मद्दत गर्छ ।